Ruka 2 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
2 Zvino mumazuva iwayo murayiro+ wakabva kuna Kesari Agasto wokuti nyika yose inogarwa inyoreswe; 2 (kunyoresa uku kwokutanga kwakaitika Kwiriniyo paakanga ari gavhuna weSiriya;) 3 uye vanhu vose vakaenda kunonyoresa,+ mumwe nomumwe kuguta rokwake. 4 Josefa akabvawo kuGarireya, muguta reNazareta, akaenda kuJudhiya, kuguta raDhavhidhi, rinonzi Bhetrehema,+ nokuti aiva weimba uye wemhuri yaDhavhidhi,+ 5 kuti vanyorwe, iye naMariya,+ waakanga aroorana naye sezvavakanga vavimbisana,+ uyo panguva ino akanga akurirwa.+ 6 Pavakanga vari ikoko, mazuva akakwana okuti asununguke. 7 Zvino akasununguka mwanakomana wake, dangwe,+ akamuputira nemachira, akamuradzika muchidyiro chezvipfuwo,+ nokuti mumba mevaeni makanga musina nzvimbo yokuti vagare. 8 Munyika iyoyowo makanga muine vafudzi vaigara kunze kwemisha vachitarisira mapoka avo ezvipfuwo panguva dzokurinda usiku. 9 Zvino ngirozi+ yaJehovha yakangoerekana yamira pedyo navo, kubwinya kwaJehovha+ kukan’aima pavari, ivo vakatya kwazvo. 10 Asi ngirozi yakati kwavari: “Musatya, nokuti, tarirai! ndinokuzivisai mashoko akanaka omufaro mukuru uchava nevanhu vose,+ 11 nokuti nhasi maberekerwa Muponesi,+ uyo ari Kristu Ishe,+ muguta raDhavhidhi.+ 12 Zvino ichi ndicho chiratidzo kwamuri: muchawana mucheche akaputirwa nemachira, akarara muchidyiro chezvipfuwo.” 13 Zvino ngirozi yacho yakangoerekana yava nevamwe vazhinji veuto rokudenga,+ vachirumbidza Mwari+ vachiti: 14 “Mwari ngaakudzwe kumusorosoro,+ uye panyika rugare+ ngaruve pavanhu vaanotendera.”+ 15 Naizvozvo ngirozi dzacho padzakanga dzabva kwavari dzaenda kudenga, vafudzi vakatanga kutaurirana vachiti: “Tinotofanira kuenda kuBhetrehema tinoona chinhu ichi chaitika, chataziviswa naJehovha.”+ 16 Vakachimbidza kuenda, vakawana Mariya naJosefa, uye mucheche wacho akarara muchidyiro chezvipfuwo. 17 Pavakamuona, vakazivisa mashoko avakanga vaudzwa pamusoro pomwana uyu muduku. 18 Vose vakazvinzwa vakashamisika pamusoro pezvinhu zvavakaudzwa nevafudzi, 19 asi Mariya akatanga kuchengeta mashoko aya ose, achiafungisisa mumwoyo make.+ 20 Vafudzi vakabva vadzokera, vachikudza nokurumbidza Mwari nokuda kwezvinhu zvose zvavakanzwa nokuona, sokuudzwa kwavakanga vazviitwa. 21 Zvino mazuva masere+ okuti vamudzingise+ paakanga akwana, akatumidzwa kuti Jesu,+ zita raakatumidzwa nengirozi asati anambwa mudumbu.+ 22 Uyewo, mazuva okuvanatsa+ maererano nomutemo waMosesi paakakwana, vakakwira naye kuJerusarema kuti vamuise kuna Jehovha, 23 sokunyorwa kwazvakaitwa mumutemo waJehovha kuti: “Munhurume wose anovhura chibereko anofanira kunzi mutsvene kuna Jehovha,”+ 24 uye kuti vape chibayiro maererano nezvinotaurwa mumutemo waJehovha kuti: “Magukutiwa maviri kana kuti hangaiwa mbiri duku.”+ 25 Zvino tarira! muJerusarema makanga muine mumwe murume ainzi Simiyoni, murume uyu akanga akarurama uye aitya Mwari, aimirira kunyaradzwa kwaIsraeri,+ uye mudzimu mutsvene wakanga uri paari. 26 Uyezve, akanga aziviswa nenzira yaMwari nomudzimu mutsvene kuti aisazoona rufu asati aona Kristu+ waJehovha. 27 Aine simba romudzimu+ akabva apinda mutemberi; uye vabereki vacho zvavakapinda nomwana muduku Jesu kuti vamuitire maererano nezvaigara zvichiitwa mutsika yomutemo,+ 28 iye akamugamuchira mumaoko ake akarumbidza Mwari, akati: 29 “Zvino, Changamire Ishe, mava kurega muranda wenyu achienda akasununguka murugare+ maererano nezvamakazivisa; 30 nokuti maziso angu aona nzira yenyu yokuponesa nayo+ 31 yamakagadzirira pamberi pevanhu vose,+ 32 chiedza+ chokubvisa nacho chifukidziro+ pamarudzi+ nokukudzwa kwevanhu venyu vaIsraeri.” 33 Zvino baba vake naamai vakaramba vachishamisika nezvinhu zvaitaurwa pamusoro pake. 34 Uyewo, Simiyoni akavakomborera, asi akati kuna Mariya amai vake: “Tarira! Iyeyu akagadzirirwa kuwa+ nokumukazve kwevazhinji pakati paIsraeri+ uye nokuda kwechiratidzo chinozvidzwa+ 35 (chokwadi, bakatwa refu richabvoora mweya wako iwewe),+ kuti kufunga kwemwoyo mizhinji kufukurwe.”+ 36 Zvino kwakanga kuine muprofitakadzi ainzi Ana, mwanasikana waFanueri, wedzinza raAsheri (mukadzi uyu akanga achembera kwazvo, uye akanga agara nomurume kwemakore manomwe kubvira paumhandara hwake, 37 uye akanga ari chirikadzi+ yakanga yava nemakore makumi masere nemana), akanga asingamboshayikwi patemberi, achiita basa dzvene usiku nemasikati,+ achitsanya nokuteterera. 38 Zvino muawa iyoyo chaiyo iye akaswedera pedyo, akatanga kuonga Mwari uye kutaura nezvomwana wacho kune vaya vose vaimirira kununurwa kweJerusarema.+ 39 Naizvozvo pashure pokunge vaita zvinhu zvose maererano nomutemo+ waJehovha, vakadzokera kuGarireya kuguta rekwavo reNazareta.+ 40 Mwana wacho muduku akaramba achikura uye achisimba,+ achizadzwa nouchenjeri, uye nyasha dzaMwari+ dzakaramba dziri paari. 41 Zvino vabereki vake vaiwanzoenda kuJerusarema gore negore+ nokuda kwomutambo wepaseka. 42 Paakanga ava nemakore gumi nemaviri, vakakwira maererano netsika+ yomutambo, 43 vakapedza mazuva acho vari ikoko. Asi pavakanga vava kudzokera, mukomana wacho, iye Jesu, akasara kuJerusarema, uye vabereki vake havana kuzviziva. 44 Vachifunga kuti akanga ari muboka revanhu vaifamba pamwe chete, vakafamba mufambo wezuva rimwe chete,+ vakabva vatanga kumutsvaka pakati pehama nevanhu vavaizivana navo. 45 Asi, vamushayiwa, vakadzokera kuJerusarema vachinyatsomutsvaka. 46 Naizvozvo, pashure pemazuva matatu vakamuwana ari mutemberi,+ akagara pakati pevadzidzisi achivateerera nokuvabvunza. 47 Asi vose vaya vakanga vachimuteerera vakaramba vachishamiswa nokunzwisisa kwake nemhinduro dzake.+ 48 Zvino pavakamuona vakashamiswa kwazvo, amai vake vakati kwaari: “Mwana, watiitirei zvakadai? Tarira ini nababa vako tanga tichikutsvaka tichitambudzika mupfungwa.” 49 Asi iye akati kwavari: “Nei maifanira kufamba muchinditsvaka? Hamuna kuziva here kuti ndinofanira kuva mumba maBaba vangu?”+ 50 Zvisinei, ivo havana kunzwisisa mashoko aakavataurira.+ 51 Zvino akaburuka navo, vakasvika kuNazareta, akaramba achizviisa pasi+ pavo. Uyewo, amai vake vakanyatsochengeta mashoko aya ose mumwoyo mavo.+ 52 Jesu akaramba achifambira mberi pakuchenjera+ nokukura mumuviri uye achidiwa naMwari nevanhu.+